Vaovao - CHINA METAL 2020 IN SHANGHAI
Fitotoana vy Shot
Voatifitra tariby tariby
Firafitra mangan'ny silika
CHINA METAL 2020 any SHANGHAI
Nanomboka ny 18 ka hatramin'ny 20 Aogositra dia natao tao amin'ny tanàna mahafinaritra an'i Shanghai ny The 18th China International Foundry Expo. Miaraka amin'ny CEO CEO Yuqiang Song sy ny ezaka tsy manam-paharoa ataon'ireo mpitantana varotra elite 12 an'ny Fengerda Group, fahombiazana lehibe ny foara.
Metal China natsangana tamin'ny 1987, ny fampirantiana dia nanjary iray amin'ireo fampirantiana indostrialy mpanorina orinasa manerantany taorian'ny fandrosoana maherin'ny 30 taona. Io no fampirantiana indostrialy fanorenan-kazo tokana karakarain'ny fikambanan'ny indostria nasionaly ao Shina, ary nahazo valiny tsara sy fanohanana matanjaka avy amin'ny orinasa lehibe mpanorina vy sy mpamatsy ery ambony sy ambany. Ny fampirantiana dia mahatratra 100000 metatra toradroa ny velarany, anisan'izany ny mihoatra ny 30 000 metatra toradroa fandefasana maty tsy ferrous ary fanariana manokana. Mpampiranty fanta-daza maherin'ny 1 300 avy amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 30 no horaisina. Miaraka amin'ny marika avo lenta, serivisy kilasy voalohany sy tombony hafa, ny fampirantiana dia hisarika mpitsidika matihanina maherin'ny 100.000 avy amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 80 hividy sy hifampiraharaha.
Metal China no fampirantiana indostria lehibe indrindra eto Shina, ary atao isan-taona. Ny fampirantiana dia fandrakofana sarimihetsika, fanariana bobongolo, fitaovana fanariana, fitaovana fanariana ary kojakoja fanariana sns, ary lasa iray amin'ireo fampirantiana marika matihanina sy manam-pahefana indrindra ao amin'ny ny indostria misy famaritana avo lenta.
Fengerda dia nanao sonia baiko dimy teny an-toerana, voninahitra lehibe ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa vy malaza any India. Oue Steel voatifitra ， Alloy fitotoana fikosoham-bary, Stainless shot no entana amidy amin'ny fampirantiana.
Fengerda dia manitrikitrika ny filamatra mahitsy sy avo lenta, amin'ny fifehezana henjana ny fizotry ny famokarana rehetra, indrindra ny fifehezana ny temparature amin'ny fizotran'ny fanodikodinana sy ny famonoana, manala ireo vokatra maloto amin'ny lavaka an'habakabaka miaraka amin'ny teôria "rivotra sy tanjaka" isika, hanatsarana ny kalitaon'ny famokarana.
Mino izahay fa ny mpanjifanay dia ho eken'ny mpanjifa bebe kokoa.
ADDRESSTengzhou City, faritanin'i Shandong, Sina
Fotoana niasana8:00 maraina-18: 00 hariva Alatsinainy hatramin'ny Sabotsy